Ireo mpampiasa IPhone dia nandany vola efa-polo dolara teo ho eo tamin'ny fampiharana tamin'ny taona lasa | Vaovao IPhone
Mpampiasa IPhone nandany $ XNUMX teo ho eo tamin'ny fampiharana tamin'ny taon-dasa
Alvaro Fuentes | | Fampiharana iPhone, Lalao IPhone
Nisy tatitra momba ny statistika nahaliana navoaka tany Amerika Avaratra. Araka ny tatitra farany navoaka tao amin'ny cradle of consumerism manerantany, ny tompon'ny fitaovana iPhone any Etazonia dia nandany $ 40 teo ho eo tamin'ny fangatahana tamin'ny taon-dasa. Ity dia notaterina avy amin'ny orinasa fanadihadiana Sensor Tower. Ity tarehimarika ity dia misy fampiharana sy karama roa ary fividianana fampiharana ao anaty fampiharana. Ny data dia mampiseho fiakarana $ 5 noho ny tatitra farany nitovy, izay nanomboka tamin'ny 2015.
Tsy mahagaga, ny ankamaroan'ny vola dia mandeha amin'ny sokajy lalao. Nanamafy i Sensor Tower fa mihoatra ny 80% ny vola miditra amin'ny Apple App Store any Etazonia amin'ny 2016 dia avy amin'ny lalao. Raha dinihintsika lalindalina kokoa ny angon-drakitra, dia hitantsika ny tarehimarika manokana izay lanin'ny tompona iPhone tsirairay amin'ny lalao, ary tafakatra 27 dolara isaky ny finday sy taona lanina amin'ny lalao ny isa. Fisondrotana $ 2 io tamin'ny taona lasa.
Ny angona hafa mahaliana ao amin'ilay tatitra dia nilaza fa ny fandaniana amin'ny fampiharana fialamboly dia nitombo 130% tamin'ny taon-dasa, tafakatra $ 2,30. Ho fanampin'izay, ny fampiharana sary sy sary (noho ny serivisy YouTube Red vaovao), dia nahatratra $ 0,70 ary nahatratra 3,60 $ ny rindrambaiko mozika.
Sensor Tower dia nanambara fa ny angona nampiasaina tamin'ny tatitra nataony dia avy amin'ny famakafakana tombanana ho 132 tapitrisa fitaovana iPhone mavitrika any Etazonia tamin'ny taon-dasa. Manamarika ihany koa fa ny vinavinam-bola dia tsy misy haba na fihenam-bidy 30% an'ny Apple. Ary farany, marihina fa ny valin'ity tatitra ity dia maneho fiakarana be amin'ny ankapobeny amin'ny fandaniam-bolan'ny mpampiasa amin'ny rindranasa sy lalao, izany hoe amin'ny atiny ho an'ny iPhone, tsy noho ny fitomboan'ny fitaovana, fa ny fitomboan'ny fanjifana an'ny tompony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Mpampiasa IPhone nandany $ XNUMX teo ho eo tamin'ny fampiharana tamin'ny taon-dasa
iOS dia hoy izy:
Tsy ho any Espana izany satria voalavo kokoa ny olona. Oo a euro avelao ianao, ory
Valio ireo iOS
Apple mandao ny hevitra momba ny efijery miolaka ho an'ny iPhone 8